कोपा अमेरिका: मेक्सिको र भेनेजुएला दोस्रो चरणमा , उरुग्वे बाहिरियो
२०७३ जेठ २८ शुक्रबार, काठमाडौं। अमेरिकामा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत समुह 'सी'को खेलमा मेक्सिकोले जमैकालाई २-० गोलले पराजित गरेको छ। खेलको १८औं मिनेटमा जावियर हर्नान्डेजले गोल गर्दै मेक्सिकोलाई १-०को अग्रता दिलाएका थिए। त्यसैगरि ८१औं मिनेटमा मेक्सिकोका ओरिब पेराल्टाले गोल गर्दै खेल २-० बनाएका थिए। दुवै तर्फबाट थप गोल हुन नसक्दा मेक्सिकोले खेल २-०ले जितेको थियो। मेक्सिकोको लगातार दोस्रो बिजय पछि १ खेल बाँकी छँदै यो समुहबाट मेक्स ... बाँकी अंश»
कोपा अमेरिका: १५ पटकको बिजेता उरुग्वे भेनेजुएलासँग पराजित
२०७३ जेठ २८ शुक्रबार, काठमाडौं। अमेरिकामा जारी कोपा अमेरिका फटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत समुह 'सी'को खेलमा भेनेजुएलाले उरुग्वेलाई पराजित गरेको छ। आज विहान भएको समूह ‘सी’को खेलमा भेनेजुएलाले कोपा अमेरिकाको सर्वाधिक विजेता उरुग्वेविरुद्ध १–० को सनसनीपूर्ण जित निकालेको हो । खेलको ३६औं मिनेटमा भेनेजुएलाका होसे सालोमोन रोण्डोनले गोल गर्दै आफ्नो टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। उक्त गोल नै १५ पटकको बिजेता उरुग्वेलाई पराजित गर्न पर्याप्त रहेको थियो। उरु ... बाँकी अंश»
टेनिस सुन्दरी मारिया शारापोवा माथि दुई बर्षको प्रतिबन्ध
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, एजेन्सी । डोपिङ टेस्ट फेल भएपछि रूसकी टेनिस सुन्दरी मारिया शारापोवा माथि दुई बर्षको प्रतिबन्ध लगाइएको छ । शारापोवाले जनवरीमा स‌ंचालन भएको अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको क्रममा प्रतिबन्धित ड्रग्स मेल्डोनियमको प्रयोग गरेको पाइएको हो । मेल्डोनियमको प्रयोग मुटु सम्बन्धी समस्या हुनेले गर्ने हो । शारापोवा सो औषधिको प्रयोग सन् २००६ देखि गरिरहेकि थिइन् । वाडाले १ जनवरी २०१६ देखि सो ड्रग्सलाई प्रतिबन्धित औषधिको सूचीमा राखेको छ । शारापोवा ... बाँकी अंश»
कोपा अमेरिका: पेरु र ईक्वेडर बिचको खेल बराबर, समुहमा ब्राजिल अगाडी
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, काठमाडौं। अमेरिकामा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत समुह 'बी'को पेरु र ईक्वेडर बिचको खेल २-२ गोलको बराबरीमा सकिएको छ। खेलमा २ गोलको अग्रता लिएको पेरु बिरुद्ध ईक्वेडरले गोल फर्काउँदै बराबरी गरेको थियो।खेलको ५औं मिनेटमा पेरुका क्रिस्टिअन कुवेबाले गोल गर्दै पेरुलाई अग्रता दिलाएको थियो। त्यस्को लगत्तै १३औं मिनेटमा एडिसन फ्लोर्सले गोल गर्दै पेरुलाई २-०को अग्रता दिलाएका थिए। ईक्वेडर खेलमा फर्किन शुरु गरे लगत्तै ३९औं मि ... बाँकी अंश»
कोपा अमेरिका: हैटी बिरुद्ध ब्राजिलको ७ गोल, कोटिन्होको ह्याट्रिक
२०७३ जेठ २७ बिहिबार, काठमाडौं। अमेरिकामा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा ब्राजिलले हैटीलाई ७-१ गोलले पराजित गरेको छ। पहिलो खेलमा ईक्वेडरसँग बराबरी खेलेको ब्राजिलको प्रतियोगितामा यो पहिलो जीत हो। फिलिप कोटिन्होको ह्याट्रिक मदतले ब्राजिलले उक्त गोलहरु गर्न सफल भएको थियो। कोटिन्होले १४औं, २९औं र ९०औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गरेका थिए। त्यसैगरि रेनाटो अगस्तोले २ गोल गरेका थिए। खेलको ३५औं र ८६औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। खेलको ५९औं मिनेटमा ग् ... बाँकी अंश»
युरो २०१६: पाँच टोली पहिलो पटक युरो खेल्दै
२०७३ जेठ २६ बुधबार, एजेन्सी। युईएफए युरो २०१६ नजिकिंदै गर्दा फुटबल प्रेमीहरुमा खेलको ब्यग्र प्रतिक्षा शुरु भएको छ। विश्वभरिका फुटबल प्रेमीहरुले पच्छ्याउने युरोलाई मिनी विश्वकप भन्दा पनि हुने गर्छ। यही समयमा दक्षिण अमेरिकी फुटबल कोपा अमेरिका पनि जारी रहेको छ। युरो कपका पुर्व बिजेताहरु नेदरल्याण्ड, ग्रीस र डेनमार्क छनौट नभएको युरोमा ५ वटा नयाँ टोलीले खेल्दैछन्। अल्बानिया, आइसल्याण्ड, नर्देन आयरल्याण्ड, स्लोभाकिया र वेल्स यसपाली युरोमा पहिलो पटक प्रतिस्पर ... बाँकी अंश»
युरो २०१६ : पारस बच्चैदेखि फुटबलका फ्यान तर खेलाडी छानेका छैनन्
२०७३ जेठ २६ बुधबार, काठमाडौं । बच्चा देखिनै फुटबलको ठूलो फ्यान हुँ । युरोकप निकै रोचक लाग्छ । यसमा राष्ट्रहरुबीच भिडन्त हुने भएकाले बढी भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्काले हाम्राकुरासंग भने, ‘युरोपियन च्याम्पियनसिप हो । उतिकै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ ।’ प्रतिष्ठीत र महत्पवूर्ण इभेन्ट हो । युरोकप आगामी शनिबार देखि फ्रान्समा हुँदैछ । यसपटक पहिलो चोटी २४ राष्ट्र सहभागि हुँदै छन् । नेपालमा राति राति नसुतेर फुटबल ह ... बाँकी अंश»
युरो २०१६ : कुन् टोली कस्ता ?
२०७३ जेठ २६ बुधबार, काठमाडौं । आसन्न युरोकप २०१६ का लागि विभिन्न तयारीहरु पूरा भएका छन् । पहिलो पटक २४ राष्ट्रले खेल्न लागेको युरोकप निकै रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ । जहाँ पाँच नयाँ राष्ट्रले पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदै छन् भने पूर्व विजेता नेदरल्याण्ड, डेनमार्क र ग्रिस छनोट हुन सकेनन् । युरोकपमा सहभागि हुने यि २४ राष्ट्रको इतिहास यस्तो छ । समूह ‘ए’ फ्रान्स विश्व फुटबलमा बलियो नाम हो फ्रान्स । उसले युरोकपको उपाधि २ पटक जितिसकेको छ भने सन् १९९८ मा भएको विश्व ... बाँकी अंश»
२०७३ जेठ २६ बुधबार, काठमाडौं। वेष्टईण्डिजमा जारी त्रिकोणीय एकदिवसिय अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता अन्तर्गत दक्षिण अफ्रिका र अष्ट्रेलिया बिचको खेलमा अफ्रिका ४७ रनले बिजयी भएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अफ्रिकाले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेटको कष्तिमा १८९ रन बनाएको थियो। फरहान बेहरडिनको सार्वाधिक ६२ रनको मदतले अफ्रिका उक्त रन बानउन सफल भएको थियो। हासिम अमलाले रन आउट हुनुअघि ३५ रनको योगदान दिएका थिए। कप्तान एबी डिविलियर्सले ३८ बलमा बिना बाउण्ड्री २२ ... बाँकी अंश»
कोपा अमेरिका: कोलम्बिया र अमेरिका बिजयी
२०७३ जेठ २६ बुधबार, काठमाडौं। अमेरिकामा जारि कोपा अमेरिक फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आयोजक अमेरिकाले कोस्टारिकालाई पराजित गरेको छ भने कोलम्बियाले पाराग्वेलाई पाखा लगाएको छ। अमेरिकाले कोस्टारिकालाई ४-०ले पराजित गरेको हो भने कोलम्बियाले पाराग्वेलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। अमेरिका-कोस्टारिका अमेरिका र कोस्टारिका बिचको खेलमा खेलको ९औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीलाई क्लिन्ट डेम्पसीले गोल गर्दै अमेरिकालाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको ३७औं मिनेटम ... बाँकी अंश»
कोपा अमेरिका: मेस्सी बिनाको अर्जेन्टिनाद्वारा डिफेन्डिङ च्याम्पियन चिली पराजित
२०७३ जेठ २५ मंगलबार, एजेन्सी । कोपा अमेरिका फुटबलमा फुटबल पावर हाउस अर्जेन्टिनाले चीलीलाई हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ । आज विहान भएको समूह ‘डी’ को खेलमा स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी बिना ओर्लेको अर्जेन्टिनाले डिफेन्डिङ च्याम्पियन चीलीलाई २–१ ले हरायो । अर्जेन्टिनालाई विजयी गराउन एन्जल डि मारीया र इभर बानेगाले एक–एक गोल गरे । खेलको ५१औं मिनेटमा एन्जेल डि-मारियाले गोल गर्दै १-० गोलको अग्रता अर्जेन्टिनालाई दिलाएका थिए। ईभर बानेगाले ५९औं मिनेटमा गोल गर्द ... बाँकी अंश»
मैत्रीपूर्ण फुटबलमा इट्ली र आइसल्याड विजयी
२०७३ जेठ २५ मंगलबार, एजेन्सी। युरोकप अघि भइरहेका मैत्रीपूर्ण खेलमा इट्ली र आइसल्याण्ड वजयी भएका छन्। आज विहान भएका खेलमा इट्लीले फिनल्याण्डलाई २–० ले हराउँदा आइल्याण्डले लिचेस्टाइनलाई ४–० ले पराजित गर्‍यो। इट्लीलाई विजयी गराउन एन्टोनियो कान्द्रेभा र ड्यानिएल डे सोसीले एक–एक गोल गरे । फिनल्याण्ड भने निरिह रहयो। यस्तै, आइसल्याण्डलाई विजयी गराउन कोल्बिन सिग्थोर्सन, बिर्किर साएभर्सन, अल्फ्रेड फिनबोगासन र इदुर गुद्जोहनसेनले एक–एक गोल गरे। यस्तै, पोल्याण्ड र ल ... बाँकी अंश»
निलम्बित क्यानलाई आइसीसीको पत्र
२०७३ जेठ २४ सोमबार, काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)ले आगामी साउनमा नेदरल्याण्डसँग हुने विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत चौथो चरणमा हुने खेलको तयारी थाल्न निलम्बित क्यानलाई पत्र पठाएको छ । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत आगामी साउन २९ र ३१ गते नेदरल्यान्डसँग हुने खेलको तयारी थाल्न आइसिसीले क्रिकेट सङ्घको निर्वाचित समिति, तदर्थ समिति, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेप र क्यानकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेलाई यही ... बाँकी अंश»
गणतान्त्रिक खेलकुद महासघंमा चन्दको निरन्तरता
२०७३ जेठ २४ सोमबार, काठमाडौँ । नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुद महासघंको तेस्रो साधारणसभाले दुईवर्षका लागि जयन्द्र बहादुर चन्दलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिएको छ । चन्दसहित कुल ३३ सदस्ययी समिती निर्विरोध चयन भएका छन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप)स्थित सेमिकभर्ड हलमा भएको साधारण सभाले विमला पौडेल उपाध्यक्षमा,नर बहादुर पुन महासचिव,प्रेमनाथ श्रेष्ठ सचिव र सि.बि. सिंह कोषाध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा रुद्र ओली,क्रिषिसरा थापा,निर्दोश तिमिलसेना ... बाँकी अंश»
युरो २०१६ : वायन रुनी हुँदै इङ्गल्याण्डले युरोकप जितेको हेर्ने पंकजको धोको
२०७३ जेठ २४ सोमबार, काठमाडौं । युरो कप २०१६ को माहोल विस्तारै तात्दै गएको छ । जसको असर नेपाली फुटबल समर्थकहरुमा समेत परेको छ । अहिले सर्वत्र युरोकपका अशोसियट राष्ट्र र सो राष्ट्रबाट खेल्ने खेलाडीबारे चर्चा भइरहेको छ । नेपाली फुटबल समर्थकसंगै नेपाली फुटबल खेलाडी र व्यवस्थापकमा समेत युरोकपको माहोल तरंगित भएको छ । थुप्रै खेलाडी र फुटबल समर्थकको युरोकप हेर्ने आ–आफ्नै योजना छ । फुटबल प्रेमी एवं अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य पंकज नेम्ब ... बाँकी अंश»
कोपा अमेरिका: आक्रमक खेलमा मेक्सिकोले उरुगवेलाई हरायो, भेनेजुएला पनि बिजयी
२०७३ जेठ २४ सोमबार, काठमाडौं। अमेरिकामा जारी कोपा अमेरिका अन्तर्गत समुह सीको खेलमा भेनेजुएला र मेक्सिको बिजयी भएका छन्। भेनेजुएलाले जमैकालाई १-० गोलले पराजित गरेको छ भने उरुग्वेलाई मेक्सिकोले ३-१ गोलले पाखा लगाएको छ। मेक्सिको-उरुग्वे खेलको चौथो मिनेटमा उरुग्वेका अलवेरो परेराले आत्मघाती गोल गर्दै मेक्सिकोलाई १-०को अग्रता दिलाएका थिए। दुवै टोली आफ्नो समुहको पहिलो खेल जित्न चाहान्थ्यो त्यही भएर खेल बढी नै आक्रमक भएको थियो। खेलको ४५औं मिनेटमा उरुग्व ... बाँकी अंश»
फ्रेन्च ओपन: चौथो प्रयासमा जोकोविचलाई पहिलो उपाधि
२०७३ जेठ २३ आइतबार, काठमाडौं। नोभाक जोकोविचले एण्डी मर्रेलाई पराजित गर्दै सन् २०१६को फ्रेनच ओपन टेनिसको उपाधि जितेका छन्। पहिलो पटक फ्रेन्च ओपन जितेका जोकोविचले बाँकी तीन वटै ग्राण्ड स्लाम जितिसकेका छन्। उपाधि हात पार्ने क्रममा जोकोविचले मर्रेलाई ३-६, ६-१, ६-२, ६-४ ले हराएका हुन्। पहिलो सेट जितेका मर्रेले आफ्नो लय कायम राख्न नसक्दा र जोकोविचले आफ्ना गल्तिहरुलाई सुधार्दै जित हात पारेका हुन्। जोकोविचले लगातार ४ ग्राण्ड स्लाम जित्ने रेकर्ड पनि बनाएक ... बाँकी अंश»
युरो २०१६ : अनिल भन्छन्–वायन रुनी स्ट्राइकरबाट मिडफिल्डमा आउने कुरा खल्लो लागिरहेको छ
२०७३ जेठ २३ आइतबार, काठमाडौं । एक साता अघि सम्पन्न लाओसविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेको नेपाली टोलीका कप्तान् हुन् अनिल गुरुङ् । चोटकै कारण उनले खेल खेल्न सकनेन् । यद्यपि, प्रशिक्षक ग्यातुको कोजीले टोलीको कप्तानी उनैलाई दिएका थिए । खेल क्रममा भने विराज महर्जनले लिड गरे । आफुले खेल्न नसकेको गुरुङ स्वीकार्छन् । ३ दिन अघि मात्रै विश्रामका लागि पोखरा उपमहानगरपालिका–५ मालेपाटन पुगेका गुरुङलाई फ्रान्समा शनिबारदेखि हुने युरोकप हेर्ने हत ... बाँकी अंश»
युरो २०१६ : सर्वोत्कृष्ठ फुटबलरको सम्मान थापेका राजु भन्छन्-फ्रान्सले जित्छ
२०७३ जेठ २३ आइतबार, काठमाडौं । वर्षको सर्वोत्कृष्ठ खेलाडीको सम्मान पाएका मिडफिल्डर राजु तामाङ निकै खुसी छन् । उनले आफ्नो सानो मेहनतले त्यो सम्मान नपाएको बताए । उनले हाम्राकुरासंग भने, ‘१३ वर्ष लामो संघर्षपछि मैले यो सम्मान पाएको हुँ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लागि साह्रै मेहनत गरेका हौं तर नतिजा हाम्रो पक्षमा आएन ।’ एन्फा र सरकारको यो सम्मान र प्रोत्साहनले नेपाली फुटबल खेलाडी फेरि जाग्नेछन् । अहिले रिजल्ट राम्रो आइसकेको छ । उनले थपे, ‘हाम्रो पालामा रिजल ... बाँकी अंश»
फ्रेन्च ओपन : बाल्यकालका साथी जोकोबीच र मर्रे फाइनल भिड्दै
२०७३ जेठ २३ आइतबार, एजेन्सी। फ्रेन्च ओपन टेनिसको फाईनलमा विश्व नं १ सर्बियाका नोभाक जोकोविच र बेलायतका विश्व बरियतामा दोस्रो नंबरमा रहेका एण्डी मर्रे बिच हुने भएको छ। दुवै खेलाडीले फ्रेन्च ओपन अहिलेसम्म जित्न सकेका छैनन्। आजको फाईनल पछि फ्रेन्च ओपनले नयाँ बिजेता पाउने । मर्रे एक हप्ताले जोकोविच भन्दा जेठा रहेका छन्। बालककालका साथी दुवै खेलाडी एउटै ट्रेनिङ क्याम्प गएका थिए। किशोरावस्थामा दुई बिच भएको पहिलो खेल जोकोविच बिजयी भएका थिए। दुवै खेलाडी एक अर ... बाँकी अंश»